Gabdho Soomaali ah oo tababar loogu soo xiray Turkiga | KEYDMEDIA ONLINE
Gabdho Soomaali ah oo tababar loogu soo xiray Turkiga
Waxay Muqdisho ka tageen bartamihii bishii July ee aynu soo dhaafnay. Waxaana la filayaa in dhawaan lagu soo celiyo si ay uga howlgalaan caasimadda iyo deegaannada ay ku sugan yihiin ciidamada Haramcad.
TURKEY - Dufcaddii ugu horreysay oo ah gabdho dhammaystay tababbar ciidan ayaa loogu soo xiray magaalada Cankiri ee dalka Turkiga, kuwaas oo kamid noqonaya ciidanka Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad.
Munaasabadda tababbarka loogu soo xirayay gabdhahan, waxaa ka qeyb galay Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya iyo saraakiil kale oo Turki ah.
Xijaar ayaa sheegay inay muujiyeen dadaal badan uuna farriin bogaadin iyo amaan ah ka wado gabadha saraakiishii iyo macalimiintii tababarka siineysay.
Gabdhahan katirsan booliiska sida gaarka ah u tababbaran ee Haramcad ayuu tilmaamay in laga sugayo howl qaran marka ay dalkooda dib ugu laabtaan lagana rabo difaaca dalka iyo dadkaba.
Waxay ka kooban yihiin 49 askari, waana gabdhihii ugu horreeyey iyaga oo hal cutub ah dowladda Soomaaliya tababar ugu dirto dalka dibadiisa, kahor inta aan loo qaadin Turkiga waxa ay tababbar horudhac ah ku qaateen xerada Jeneraal Goordan ee Muqdisho.
Si kastaba, ciidanka Haramacad oo katirsan booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la asaasay markii uu xukunka qabtay Madaxweyanaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo, waxayna intooda badan ay horay uga tirsanaayeen ciidanka nabadsugidda ee NISA.